Be olona vontom-pinoana - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Midadasika ny saha fitoriana, 25 000 km2 mahery, misy ireo faritra ahitana kristianina efa tena vontom-pinoana, ao kosa ireo vao amafazam-boa ny diosezin'i Fianarantsoa. Trano fiangonana 853 no miorina manerana ny diosezy, hatrany amoron-dranomasina Ampasimanjeva, anelanelan’i Manakara sy Mananjary, ka hatrany Tsitondroina, akaikin’i Beroroha (Morombe). Ny fiangonana reny dia ny katediraly Ambozontany naorina tamin’ny taona 1890. Ny zandriny indrindra dia ny fiangonana Trinite Masina Ambatovory, notsofin-drano tamin’ny taona 2013. Tanàna be kristianina i Fianarantsoa fa tanàna be antokom-pinoana ihany koa.
Imasoana ny fanabeazana sy fampivoarana
Mifanindran-dalana amin’ny fanorenana fiangonana ny fanorenan-tsekoly izay nimasoan’ireo misionera namaky lay. Najoro ny sekoly fanofanana katesista tao Ambodisaha, nafindra any Andriamboasary. Nijoro koa ny Foiben’ny Asa aman-dRaharaha Katolika (FARK). Fantatry ny maro ny fitaovana fitoriana ny Vaovao Mahafaly vita ao amin’ny Trano Pirinty Ambatomena sy ny Fivarotam-boky ho an’ny rehetra 50 taona lasa izay.
Nifanome tanana tamin’izany ireo misionera vahiny sy Malagasy ka ny fametrahana fikambanan-drelijiozy saika isaky ny distrika kosa no nanohizana izany ho fanamafisana ny fampianarana sy fanabeazam-pinoana. Ny fanamafisana orina ny fianakaviana ankohonan’Andriamanitra no ezahina mafy amin’izao hananana tsangambaton’ny faha 60 taonan’ny diosezy izao. Amin’ny fanabeazana sy fitaizam-pinoana any anivon’ny tanàna rehetra any. Singanina amin’ireny ny EVA, fibeazana miaina sy mitia. Eo ihany koa ny asa fampivoarana toa ny sahanin’ny FAFFIAM mitodika manokana amin’ny fianakaviana, sy ny ataon’ny fikambanana masina lahika mivondrona ao amin’ny CEPAL. Ny ho fananana diosezy maitso, ny fandraisana an-tanana ireo sokajin’olona tra-pahasembanana manokana ary ny fitantanana toeram-pitsaboana (hopitaly, toibi-pahasalamana) dia mitohy hatrany. Ifarimbonana amin’ireo fikambanan-drelijiozy.
Ireo raiamandreny, olon’ny finoana
Nisongadina tamin’ny fanorenana ny finoana ry mompera Finaz, pretra zezoita (1871) niaraka tamin’Ingahy Piera Ratsimba, sy ny maseran’ny Saint Joseph de Cluny (1872). Nitantana ny diosezy voalohany i Mgr Xavier Thoyer hatramin’ny 1955. Fa talohan’izany i Mgr Charles Givelet no nampiaina ny finoana taty Fianarantsoa fony faha Vikaria Apostolika. Nandray an-tanana ny arsidiosezy tamin’ny 1962 i Mgr Gilbert Ramanantoanina, eveka malagasy voalohany, nohamasinina tamin’ny taona 1960. Nandimby azy i Mgr Philibert Randriambololona. Mgr Fulgence Rabemahafaly no mitantana ankehitriny.
Mananjara ity diosezy ity satria ireo olomasina sy olontsambatra teto amintsika malagasy dia samy nandalo tao. Voamariky ny tantara fa nandeha an-tongotra iray volana hihazo ny tanin’ny Betsileo avy any Antananarivo ny olontsambatra Victoire Rasoamanarivo (1873). Niroborobo hatrany ny finoana katolika na dia mbola narefo aza. Voairaka tao Ambohimandroso Ambalavao koa ny olomasina Jacques Berthieu (1881-1883), nampiely ny finoana. Nampahazo faka ny fitiavana ny fanabeazana katolika kosa ny fifikiran’olontsambatra Louis Raphaël Rafiringa (1917-1919), ka na dia nalefa haka rivotra fotsiny aza ny fototry ny fanirahana dia lasa mpampianatra nahafoy ny ainy ho an’ny Betsileo izy. Lasa Fianarantsoa be lakilasy no anaran’ny tanàna, be relijiozy ihany koa. Fikambanan-drelijiozy vavy 35 sy lahy 16 no misy ankehitriny. Nampiaiky volana ny fahafoizan-tenan-dry olontsambatra Jean Beyzim (1902-1912) nifanosina tamin’ireo marary hoditra tao Marana, toerana fanaovana fivahinianana masina ankehitriny. Namangy tao Fianarantsoa koa ny olontsambatra Papa Joany Paoly II (1 mey 1989). Nifameno ny fahendrena sy ny fitantanan’Andriamanitra, nomban’ny vavaka niaraka tamin’i Masina Maria. Satria hatramin’ny 8 desambra 1871, fetin’i Masina Maria tsy azon-keloka, no nanolorana ho an’ny katolika ny toerana Ambozontany iorenan’ny katediraly ankehitriny.
Hiaino ny finoana
Mendrika hodinihina ny taratasy pastoraly natolotr’i Mgr Fulgence Rabemahafaly ho an’ny toko telo mahamasa-nahandro tamin’ity taona 2014 ity, dia ny pretra, ny relijiozy ary ny lahika. Hoy izy hoe : “Azo lazaina ho eo amin’ny kihon-dalana saro-pantarina isika malagasy ankehitriny. Misy zo fototra tsy maintsy hajaina hita ao amin’ny Konsily Vatikanina II, fa ny rariny no tsy maintsy toavina mba ho tena fivoaran’ny vahoaka marina no katsahina ary ny soa iombonana no hanentana. Tsy mahay mifantina ny voankazo an’ala isika raha tsy hianatra ny haitao maro nananan’ireo zoky raiamandreny ireo, ka maika hihinana am-bolony ny fanatontoloana mampiranty toe-tsaina tsy voafehy. Ny firotsahana eo anivon’ny fiarahamonina no anisan’ny tsiambaratelon’ny razantsika hendry sy lalim-pandinihana, raha namafy voan’ny Vaovao Mahafaly izy ireny. Koa moa tsy tokony hirotsaka bebe kokoa eo amin’ny tanàna ve ny fijoroantsika ho vavolombelon’ny finoana noraisina tamin’ny batemy va isika ankehitriny, fa tsy ho ny indray andro any am-piangonana isan-kerinandro fotsiny. Tsy maintsy halalinina isan’andro ny finoana ary tsy hatahotra fa hamafisina ny firaisan-kina. Hahay miaina am-piadanana, ary samy hanatanteraka tsara ny asany” (1Tes 4,11).